माघ ५ बाट पञ्चकन्या माईको सेयर बिक्री खुल्ने - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
पुष २६, २०७४ 4221 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर कम्पनीले आगामी माघ ५ गतेबाट स्थानीयका लागि सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । इलाममा निर्माण सम्पन्न १२ मेगावाटको माथिल्लो माई र ६.१ मेगावाटको माथिल्लो माई ‘सी’ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्न लागिएको हो ।
इलाम नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकाका स्थानीयले ११ करोड मूल्यबराबरको ११ लाख कित्ता सेयर खरिद गर्न पाउने कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सन्तोषकुमार प्रधानले बताए । उनका अनुसार सन्दकपुर गाउँपालिकाबासीले ६ लाख ६० हजार तथा इलाम नगरपालिकाका स्थानीयले ४ लाख ४० हजार कित्ता सेयर खरिद गर्न पाउने छन् ।
सेयर खरिदकर्ताले सनराइज बैंक र प्रभू बैंकको इलाम शाखा, सन्दकपुर गाउँपालिका तथा आयोजनाको माबुस्थित कार्यालयमा आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
खरिदकर्ताले न्युनतम २० देखि अधिकतम ५ हजार ५ सय कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन पाउने छन् । खरिदकर्ताले माघ १९ गतेभित्रमा आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ ।
सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँड गर्न सनराइज क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई जिम्मा दिइएको छ । स्थायीको सेयर बाँडफाँड लगत्तै सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत सेयर निष्कासन हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनाले व्यवसायीक उत्पादन सुरु गरेको पहिलो आर्थिक वर्षबाट कम्पनी नाफामा जान सफल भएको प्रधानले बताए ।
कम्पनीले निर्माण गरेको माथिल्लो माई ‘सी’ ले गत साउनबाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । यसअघि निर्माण भएको १२ मेगावाटको माथिल्लो माई पनि संचालनमा छ ।